Muslimiinta iyo Yahuuda UK oo nabad ku baaqay - BBC News Somali
Image caption Baaqan ayaa imaanaya iyadoo Hamas iyo Israa'iil ay xabad joojin ku heshiiyeen
Warbixint ay sida wada jirka ah u soo saareen gollahan Muslimiinta iyo Guddiga yahuuda ee Briatain ayaa waxay tilmaamaysaa in ay jiraan waxyabo badan oo mideyn kara muslimiinta iyo yahuuda kunool dalka Britain.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in tahay arrin cad in bulshooyinka yahuuda iyo kuwa Muslimiinta ah ee Britain ay ka qabaan fikrado qoto dheer oo is diidan, waxa ay ugu yeertay colaada u dhaxeysa Israel iyo Falastiin.
Warbixintu waxa lagu sheegay in ay musiibo tahay dhimasho walba oo ku timaado qof rayid ah, dagaalada ka socda bariga dhexe, waxayna sheegtay in ay tahay arrin aanan la aqbali kareynin oo aanay raali ka ahayn diinta islaamka iyo tan yahuuduba bartlmaamaydsiga shacabka.
Inkastoo ay jirto coladaasi, waxa haddana loogu baaqay labada dhinac in ay ku dadalaan sidii ay isula shaqeyn lahayeen si loo horumariyo xiriirka wanaagsan ee ay ku leeyihiin Britain gudaheeda.
Labada buslho ayaa loogu baaqay inaysan colaad ka abuurin gudaha Britain. Ayna ka shaqeeyaan nabad iyo Isfahan dhexmnara Muslimiinta iyo Yuhuuda.
Gollaha muslimiinta iyo Guddiga Yahuuda ee Britain ayaa sheegay in loo baahan yahay in maanka lagu hayo sida ugu wanaagsan ee uu qof kastaa u gudbin karo cabashadiisa, iyadoo aysan colaad iyo naceyb ku jirin.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in aanan wax qiil ah loo helayn in lagu dhaqaaqo isir nacayb, rabshado iyo cagajuglayn qaab walba oo ay ahaataba.
Warbixintaasi ayaa waxay daba socotaa ka dib markii ay kordheen weerarada lagu beegsanayo dukaamada ay leeyihiin yahuuda, hantidooda iyo meelaha ay ku cibadeystaan.
Dadka islaamka ah ee kunool Britain ayaa waxa lagu qiyaasaa ku dhowaad seddax milyan, halka yahuuduna la sheegay in tiradoodu ay gaarayso seddax kun.